XOG: Maamulka Milan oo qandaraaska u kordhinaya macallin Gattuso? – Gool FM
XOG: Maamulka Milan oo qandaraaska u kordhinaya macallin Gattuso?
Raage February 11, 2018
(Milano) 11 Feb 2018 – Kooxda AC Milan ayaa ka baaraan degeysa in ay qandaraaska u kordhiso macallin Gennaro Gattuso kaasoo la gaarsiinayo tan iyo Juun 2020.
Sida uu dhigayo Tuttomercatoweb, maamulka Rossoneri ayaa la dhacsan horumarka uu sameeyay macallinka KMG ah oo bishii Nofeembar uun xilka ka dhaxlay macallinkii la eryey ee Vincenzo Montella, iyagoo sidaa darteed xilka u kordhinaya.
Macallinkii hore ee da’yarta Milan ee Primavera ayaa kaddib bilow gebi dhaclays ah, waxay haatan u muuqataa koox jidka qabsatay iyadoo 5 guul iyo 3 bareejo kala timi 8-dii kulan ee ugu dambeeyay ee Serie A iyo Coppa Italia oo ay nus-dhamaadka joogaan.
Natiijadii shalaytoole ay 4-0 ku xaaqeen kooxda SPAL ayaa gaar ahaan aad u cajabisey maamulka, iyagoo ka maqsuuday kalsoonida ay laacibiintu ku qabaan howsha uu qabtay mudada kooban, gaar ahaan sida uu kooxda u bedeley caqliyad ahaan iyo jir ahaanba.
Raacihii hore ee Milan, Gattuso ayay tani u tahay markii ugu horreeysey ee uu leeyliyo koox Serie A, isagoo horay usoo qabtay kooxaha Palermo Serie B, FC Sion, OFI Crete iyo Pisa.
Sergio Ramos oo xalay gaaray guushiisii 500-aad ee xirfadiisa kubadda cagta
Garsooraha qabanaya kulanka Juventus vs Tottenham oo la shaaciyay!